မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် သမီးလေး Stormi နဲ့ Portrait ပုံတွေ တင်လိုက်တဲ့ Kylie
10 Aug 2018 . 2:49 PM
မကြာသေးခင်ကမှ အမေရိကန်ရဲ့ ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် အသက်အငယ်ဆုံး အမျိုးသမီး ဘီလျံနာဖြစ်လာတဲ့ Kylie Jenner ဟာ အခုချိန်မှာတော့ အသက်(၂၁) နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ မွေးနေ့ရှင် ဘီလျံနာမလေးဟာ သူမမွေးနေ့မှာ အခြားသူတွေလို မွေးနေ့ပါတီ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြုလုပ်ဘဲ သူမရဲ့ကလေး Stormi နဲ့ Portrait ဓာတ်ပုံလေးတွေသာ ရိုက်ကူးကာ အမှတ်တရလေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖြတ်သန်းလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Stormi နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Portrait ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ Instagram မှာ တင်ပြီး မျှဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမျှဝေခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးပုံမှာဆိုရင် Kylie က Stormi ကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ပွေ့ဖက်ထားပြီး Stormi ခေါင်းလေးကို သူမရဲ့ပါးနဲ့နီးကပ်စွာ ထားရှိထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီပုံရဲ့အောက်မှာတော့ သူမက “ဒီနှစ် မွေးနေ့ညမှာတော့ အကောင်းမွန်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဟာ သူမနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ သူမရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့Stormi နဲ့ အတူရှိခွင့်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းချစ်တယ် ငါရဲ့နတ်သမီးလေး” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
ဒုတိယပုံမှာတော့ Kylie ဟာ Stormi နဲ့ အနည်းငယ်အကွာဝေးအနေအထားမှာရှိနေပြီး ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်နေကာ နှစ်ယောက်စလုံးက ကင်မရာကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲလိုရိုက်ကူးထားတဲ့အပြင် သူမက သူမ Fan တွေ ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Stormi ရဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ Stormi ကို ပွေ့ချီထားတဲ့ Kris ရဲ့ပုံတွေကို Instagram မှာတင်ကာ သူမဘယ်လောက်သဘောကျနှစ်သက်လဲဆိုတာကို ရေးသားဖော်ပြကာ Fan တွေကို ချစ်ကြောင်း ပြောထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် Stormi ဟာ သူမအတွက်တော့ သူမရဲ့အသေးစားအမွှာလေးပါပဲလို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ Stormi ရဲ့ မျက်နှာကို အရင်ကတင်သလိုမျိုး ကွယ်ထားဖြတ်ထားတာမျိုးမရှိဘဲ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ မျက်နှာတစ်ခုလုံးပုံကို သူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ Instagram ပေါ်တင်ပြီး မျှဝေပေးခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Kylie က Stormi နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ အလေးအနက်ထားလဲဆိုတော့ အရင်က Stormi ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပေါ်နေတဲ့ ပုံတွေအကုန်လုံး တင်ထားတာကို ပြန်ဖျက်ခဲ့ဖူးတာမျိုးတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်ထား ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေ တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လတုန်းက Instagram ရဲ့ Comment မှာ Kylie က သူမရဲ့ရင်သွေးလေးပုံကို လူအများမျှဝေကာ မှတ်ချက်ပြုမှာကို မလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့ ရေးသားကာ ဖြေရှင်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အရင်က ကွယ်ထားဝှက်ထားခဲ့ပေမယ့်လည်း သူမမွေးနေ့လို ထူးခြားတဲ့ နေ့ရက်မျိုးမှာတော့ Stormi နဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Portrait ပုံတွေကို ခြွင်းချက်အနေနဲ့ မျှဝေပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Kylie နဲ့ Stormi တို့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အမှတ်တရတွေရှိနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးလည်း အပျော်တွေကူးစက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း Kylie နဲ့ Stormi တို့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး မမေ့မလျော့နဲ့ Birthday Wish လေးတွေ ပြုလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။
မှေးနအေ့မှတျတရအဖွဈ သမီးလေး Stormi နဲ့ Portrait ပုံတှေ တငျလိုကျတဲ့ Kylie
မကွာသေးခငျကမှ အမရေိကနျရဲ့ ကိုယျထူးကိုယျခြှနျ အသကျအငယျဆုံး အမြိုးသမီး ဘီလြံနာဖွဈလာတဲ့ Kylie Jenner ဟာ အခုခြိနျမှာတော့ အသကျ(၂၁) နှဈပွညျ့သှားပါပွီ။ မှေးနရှေ့ငျ ဘီလြံနာမလေးဟာ သူမမှေးနမှေ့ာ အခွားသူတှလေို မှေးနပေ့ါတီ ကွီးကွီးကယျြကယျြမပွုလုပျဘဲ သူမရဲ့ကလေး Stormi နဲ့ Portrait ဓာတျပုံလေးတှသော ရိုကျကူးကာ အမှတျတရလေးတှေ ပွုလုပျပွီး ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ဖွတျသနျးလိုကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Stormi နဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ Portrait ဓာတျပုံတှကေိုတော့ Instagram မှာ တငျပွီး မြှဝခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူမမြှဝခေဲ့တဲ့ ပထမဆုံးပုံမှာဆိုရငျ Kylie က Stormi ကို ရငျခှငျထဲမှာ ပှဖေ့ကျထားပွီး Stormi ခေါငျးလေးကို သူမရဲ့ပါးနဲ့နီးကပျစှာ ထားရှိထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အဲဒီပုံရဲ့အောကျမှာတော့ သူမက “ဒီနှဈ မှေးနညေ့မှာတော့ အကောငျးမှနျဆုံးလကျဆောငျတဈခုဟာ သူမနဲ့အတူ ရှိနခေဲ့ပါပွီ။ အဲဒါကတော့ သူမရဲ့သမီးလေးဖွဈတဲ့ Stormi နဲ့ အတူရှိခှငျ့ရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရမျးခဈြတယျ ငါရဲ့နတျသမီးလေး” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။
ဒုတိယပုံမှာတော့ Kylie ဟာ Stormi နဲ့ အနညျးငယျအကှာဝေးအနအေထားမှာရှိနပွေီး ကုတငျပျေါမှာထိုငျနကော နှဈယောကျစလုံးက ကငျမရာကို တညျ့တညျ့စိုကျကွညျ့နတေဲ့ပုံစံနဲ့ ရိုကျကူးထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အဲလိုရိုကျကူးထားတဲ့အပွငျ သူမက သူမ Fan တှေ ပွုလုပျပေးထားတဲ့ Stormi ရဲ့ပုံလေးတှနေဲ့ Stormi ကို ပှခြေီ့ထားတဲ့ Kris ရဲ့ပုံတှကေို Instagram မှာတငျကာ သူမဘယျလောကျသဘောကနြှဈသကျလဲဆိုတာကို ရေးသားဖျောပွကာ Fan တှကေို ခဈြကွောငျး ပွောထားတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒါအပွငျ Stormi ဟာ သူမအတှကျတော့ သူမရဲ့အသေးစားအမှာလေးပါပဲလို့လညျး ဆိုထားပါသေးတယျ။
နောကျထပျထူးခွားတာတဈခုကတော့ Stormi ရဲ့ မကျြနှာကို အရငျကတငျသလိုမြိုး ကှယျထားဖွတျထားတာမြိုးမရှိဘဲ ကွုံတောငျ့ကွုံခဲ မကျြနှာတဈခုလုံးပုံကို သူမရဲ့မှေးနအေ့မှတျတရအနနေဲ့ Instagram ပျေါတငျပွီး မြှဝပေေးခဲ့ခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ Kylie က Stormi နဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလောကျထိ အလေးအနကျထားလဲဆိုတော့ အရငျက Stormi ရဲ့မကျြနှာတဈခုလုံးပျေါနတေဲ့ ပုံတှအေကုနျလုံး တငျထားတာကို ပွနျဖကျြခဲ့ဖူးတာမြိုးတောငျ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ကှယျထား ဖွတျထားတဲ့ပုံတှေ တငျခဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး ဇှနျလတုနျးက Instagram ရဲ့ Comment မှာ Kylie က သူမရဲ့ရငျသှေးလေးပုံကို လူအမြားမြှဝကော မှတျခကျြပွုမှာကို မလိုလားတဲ့အတှကျကွောငျ့ပါလို့ ရေးသားကာ ဖွရှေငျးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
အရငျက ကှယျထားဝှကျထားခဲ့ပမေယျ့လညျး သူမမှေးနလေို့ ထူးခွားတဲ့ နရေ့ကျမြိုးမှာတော့ Stormi နဲ့ တှဲဖကျရိုကျကူးထားတဲ့ Portrait ပုံတှကေို ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ မြှဝပေေးခဲ့ခွငျး ဖွဈပုံရပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ Kylie နဲ့ Stormi တို့ မှေးနမှေ့ာ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ အမှတျတရတှရှေိနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေိုကွညျ့ပွီး ပရိသတျကွီးလညျး အပြျောတှကေူးစကျသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး Kylie နဲ့ Stormi တို့ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး မမမေ့လြော့နဲ့ Birthday Wish လေးတှေ ပွုလုပျပေးသှားကွပါဦးနျော။
by Moethae Say . 45 mins ago